3 echiche ịmepụta nkuku kọfị | Bezzia
3 echiche ịmepụta akuku kọfị
Maria onyekwere | | Nri
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị otu m, otu n'ime ndị na-eche na ụbọchị anaghị amalite ruo mgbe ị ga-enwe kọfị mbụ, ọ ga-amasị gị ndụmọdụ ndị anyị na-ekerịta taa. Atụmatụ dị iche iche maka mepụta obere akụkụ maka kọfị mee ka ihe dịrị gị mfe n'ụtụtụ.
Ana m eche maka ndị, dịka m, na-agba ọsọ na pilot akpaaka ruo mgbe ị richara nri ụtụtụ. Ọ gaghị enyere gị aka inwe ihe niile ị chọrọ n'otu ebe? Ana m ekwu maka onye na-eme kọfị, iko, teaspoons, sugar na ihe ị na-eji soro kọfị. Naanị ihe ị ga - eme bụ ịhazigharị kichin.
Ịrara akuku maka kọfị na kichin adịghị eme ka ọ bụrụ ihe ezi uche dị na ya na kichin niile, ma ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ndị na-eme ememe kọfị na-ewe ihe dị mkpa n'oge dị iche iche nke ụbọchị. Na e nwere ụzọ dị iche iche iji megharịa kichin ka ịmepụta otu, dị ka anyị na-egosi gị taa.
1 Ezochiri n'ime ime ụlọ
2 Na tebụl dị n'elu
3 N'ebe a na-adọba ụgbọala n'efu
Ezochiri n'ime ime ụlọ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwe akụkụ raara nye kọfị mana ị chọghị ka ọ dị n'anya ị nwere ike zoo ya n'ime ime ụlọ. Ikekwe, ihe niile ị ga - eme iji mepụta otu bụ ịhazigharị obere kabinet kichin, na-ebugharị ihe ole na ole site na ebe a gaa ebe ahụ.
Abụọ shelves nwere ike ezuru iji chekwaa ihe niile ịchọrọ: onye na-eme kọfị, kọfị, iko atọ ma ọ bụ anọ, teaspoons atọ ma ọ bụ anọ, ụfọdụ ite nwere sweets ma ọ bụ achịcha na nhọrọ, ihe na-ekpo ọkụ maka mmiri ara ehi. Ọ bụrụ na, na mgbakwunye, shelves ndị a dị nso na friji na ngwa ndakwa nri, ị gaghị akwaga iji kwadebe nri ụtụtụ.
Taa, a na-eji ụlọ kichin eme ihe na-eburu ọrụ ha n'ọdịnihu n'uche. Zoo obere ngwa ngwa mgbe a na-ejighị ha eme ihe, ọ ghọọla ihe na-emekarị, n'ihi ya, ndị a kabinet nwere ọnụ ụzọ na-anakọta na kọbọd n'onwe ya. Mgbe kọbọd ahụ meghere, ha na-ezoro ezo ma ghara igbochi ịgagharị na kichin ma ọ bụ ịkwadebe kọfị na nke a.
Na tebụl dị n'elu
O nwere ike ịbụ na ị nwelarị ite kọfị na counter, ọ bụ eziokwu? Ị nwere ụfọdụ kabinet ma ọ bụ shelves na nke a iji mepụta kọfị kọfị gị ebe ahụ? Ị nwere ike ịhazi akụkụ nke ihe ndị dị mkpa na countertop ma sonye na kọbọd dịka anyị mere na mbụ.
Mgbidi ahụ ọ tọgbọ chakoo? Mgbe ahụ, ọ ga-ezuru gị idowe ụfọdụ nko maka ikowe iko na ụfọdụ shelves na ite ma ọ bụ ite iji hazie arịa na sweets niile. Ọ bụrụ na ị na-emepụtakwa ntakịrị ọdịiche agba na shelves ndị a, akụkụ ahụ ga-adọta uche nke onye ọ bụla na-abanye na kichin.
N'ebe a na-adọba ụgbọala n'efu
Ị chọrọ ohere nchekwa karịa na kichin? Ị nwere ike iji mkpa a dị ka ohere ịmepụta akụkụ kọfị dị iche iche. Ihe nchekwa ma ọ bụ trolley bụ isi zuru ezu iji nwee ike iwepụ onye na-eme kọfị na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na kichin kichin na countertop.
Shelf Kallax si Ikea, Dị ka nke ị na-ahụ na-acha ọcha na otu n'ime ihe oyiyi ndị a, ọ ga-ezuru iji wepụ ihe mkpuchi kichin ma mepụta, n'otu oge ahụ, ọdụ kọfị nke gị. Ọ na-efu naanị € 25, yabụ na ọ bụ nnukwu ohere.
Debe onye na-eme kọfị na arịa ya n'elu ngwá ụlọ. Debe shelves maka sweets, condiments, na ihe ọ bụla ọzọ ị chọrọ ime kọfị. Na ọ incorporates na ngwá ụlọ a shelf na-enyere gị aka ịhazi iko na nye aka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'ime ụlọ.
Kedu otu n'ime ụzọ ndị a ga-amasị gị ka ị nwee ike ịhazi akụkụ kọfị gị na kichin? Anyị hụrụ nkuku zoro ezo n'anya n'ihi na ha na-ekwe ka kichin na-eleba anya n'usoro, ma anyị ghọtara na ha niile bara uru. Ọ bụkwa na inwe ihe niile dị anyị mkpa iji kwadebe nri ụtụtụ ma ọ bụ nri n’otu ebe na-eme ka ihe niile dị ngwa. Ị gaghị esi ebe a gaa ebe ahụ n'ụtụtụ. Ọ ga-ezuru gị ịga na nkuku gị, dozie kọfị ma nọdụ ala ka ọ nụ ụtọ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Nri » 3 echiche ịmepụta akuku kọfị
Eziokwu Spanish na-egosi na ị nwere ike ịhụ na Netflix
Macaroni na ose pesto na bonito